Mpanamboatra fitoeran-tsakafo PET - China Factory Container Pet Sakafo sy mpamatsy
Ao amin'ny COPAK, Kaontenera plastika azo ariana, Mitahiry fivarotana kaontenera plastika azo asiana salady sy sakafo mangatsiaka hafa. Na mampiantrano fety ianao na manao orinasan-tsakafo fikarakarana sakafo, ireo kaontenera ireo dia tonga lafatra amin'ny fanolorana lovia.
Kaontenera plastika azo ariana mety ho endrika mahitsizoro sy toradroa na kaontenera plastika boribory miaraka amina kaontenera marobe. Azonao atao ny misafidy kaontenera madio na fitoeran-tsakafo misy karazana sticker.
Kaontenera PET Deli
Kaontenera PET Deli miaraka amin'ny rakotra voaisy tombo-kase azo antoka azo avy amin'ny fitaovana PET mazava be mba hanomezana fahitana sy fiarovana miavaka ho an'ny vokatra sakafo mangatsiaka anao. Tonga lafatra ho an'ny salady, voankazo, legioma, sakafo deli ary yaourt. Izy ireo koa dia azo ahodina 100% amin'ny fanodinana curbside.
IRETO PET fitoeran-tsakafo ary ny sarony dia malaza maka safidy ho an'ny sakafo mangatsiaka, sandwich, voankazo ary salady. Natao izy ireo mba ho safidy fitahirizana mahaliana ho an'ny entanao ary misy amin'ny habe sy halaliny isan-karazany.